Tababare Solskjær oo ka hadlay dareenkiisa, kadib markii si Rasmi ah loogu magacaabay Tababaraha Man United… (Muxuuse ka yiri kulanka Barcelona?) – Gool FM
Tababare Solskjær oo ka hadlay dareenkiisa, kadib markii si Rasmi ah loogu magacaabay Tababaraha Man United… (Muxuuse ka yiri kulanka Barcelona?)
(England) 29 Maarso 2019. Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu si joogta ah ula wareego shaqada tababarka ee Red Devils.
Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa dhinaca kale xusay in kooxda Barcelona ay u adag tahay sida buur la fuulaayo oo kale.
Shalay ayay ahayd kadib markii ay maamulka kooxda Manchester United ay si rasmi ah ugu magacaabeen Ole Gunnar Solskjær macalinka sida tooska ah u maamuli doono Red Devils.
Hadaba tababare Ole Gunnar Solskjær oo ka soo muuqday shirkii jaraa’id ee loogu soo bandhigayay saxaafada, isagoo ka hadlay dhowr arimood waxaana hadaladiisa ka mid ahaa.
“Tani waa riyada ugu weyn ee noloshayda, waxaa laga yaabaa in ay ahayd riyo iska yar, laakiin waxay ahayd wax aan mar walba ku riyoon jiray, si la iigu dhiibo mas’uuliyada ah inaan noqdo macalinka joogtada ah ee kooxda Manchester United”.
“Ujeedooyinkeyga mustaqbalka kuma saabsana oo kaliya ku guuleysiga koobab, maalinta aan ka tagayo kooxda, waxaan rajeynayaa inaan ka tago dhoola-cadeyn”.
“Waxaan sii ahaan doonaa sida ay haatan tahay dabeecadeeda ,waxaan mar walba noqon doonaa qof rajo wanaagsan leh, waan ogahay waxyaabaha laga filan karo kooxdaan, waan ogahay taariikhda kooxdaan iyo dhaqankeeda, waxaan doonayaa inaan ku guuleysto koobabka”.
Intaas kadib tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu ka hadlay kulanka la wada sugayo ay kooxda Barcelona kula ciyaari doonaan wareega siddeeda ee tartanka Champions League.
“Waa kulan aad u adag, Barcelona waa sida buur weyn ee aad fuuleyso, balse horey ayaan u soo fuulnay buuraha”.
Si kastaba kooxda Barcelona ayaa marti ku noqon doonto garoonka Old Trafford Arbacada soo aadan, si ay u wada ciyaaraan Manchester United kulanka lugta hore wareega siddeed dhamaadka ee tartanka Champions League.
Lionel Messi oo ku guuleystay abaal-marinta goolkii ugu fiicnaa abid taariikhda kooxda Barcelona... + SAWIRRO